कोरोनाका कारण थप एक जनाको मृत्यु, हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४५ पुग्यो - Rajmarga
कोरोनाका कारण थप एक जनाको मृत्यु, हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४५ पुग्यो
काठमाडौं । नेपालमा थप २ जनाको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएसँगै कोरोनाका कारण हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४५ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार पर्साका एक महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो । वीरगञ्ज ११ का ८५ वर्षका महिलाको नारायणी अञ्चल अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना विशेष अस्पतालमा अर्का एक युवतीको पनि हिजो नै मृत्यु भएको छ । मृतक युवती बारा परवानीपुर गाउँपालिका–४ घर भएकी १७ वर्षीया रहेको प्रहरीले जनाएको छ । नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ड डा मदन उपाध्यायले सीआइएनलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश २ को पर्सामा समुदायस्तरमा नै कोरोना फैलिएको शङ्का गर्दै आजदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
सीआईएनसँग कुरा गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले आजबाट अर्को सूचना नभएसम्मका लागि जिल्लाभरिमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताउनुभयो । पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ३३ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
देशभरका प्रयोगशालामा ३ हजार ९८७ नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरुमा सङ्क्रमण देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै पर्सामा ३२ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् । झापाका २५, काठमाडौँका १०, दैलेख र कैलालीका ८/ ८ जना, सप्तरीका ७, सुनसरी र कास्कीका ५÷५ जना तथा दाङ, नवलपुर र रुपन्देहीका ४/४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
Previous post:प्राविधिक शिक्षाका प्रयोगात्मक परीक्षा औपचारिकता मात्रै !
Next post:कक्षा ११ को परीक्षा अब विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने